UNGAYICEBISA NJANI INTOMBI OYITHANDAYO? IINGCEBISO ZEZINDULULO- PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUDLELWANE
Ungayicebisa njani intombi oyithandayo? -Izimvo zesindululo
Imidlalo Amabhaso amaqakamba e-New Zealand: U-Williamson uphumelele imbasa ye-Sir Richard Hadlee okwesihlandlo sesine
Ekhaya Ulwalamano Uthando nokuthandana Uthando ne Romance oi-Anjana NS Ngu UAnjana Ns ngoJulayi 25, 2011
Amadoda nabafazi bobabini bafuna ukuba olu suku lube ngumzuzu ongalibalekiyo ebomini babo. Kodwa kubonakala ngathi azikho iindlela ezintsha zokuphakamisa okanye ukubonakalisa iingcinga kuba phantse yonke into yenziwe. Ewe, siya kukunceda uze nezimvo ezintsha.
Malunga nendlela yokuPhakamisa kunye neendlela zokuPhakamisa (izimvo zesindululo) -
Iindlela eziqhelekileyo zokucebisa: Indoda iyaguqa ngedolo ngeringi (mhlawumbi ixabise umvuzo wenyanga) ngaphambi kokuyicela ukuba ichithe ubomi bayo bonke kunye nayo. Le ndlela yesiko yokucebisa isasebenza, kwaye inokwahlulwa ibe yindlela eqhelekileyo yokucela umfazi ukuba akutshate. Kodwa kwezi ntsuku, abantu basetyhini bangathanda ukujongwa yimvakalelo, uthando kunye nokuqala.
Ukuba umhlobo wakho oyintombazana ungumntu onomdla, ungazama ukumcebisa eluphahleni, okanye unyuke intaba okanye induli kunye uze uthethe loo magama. Uya kuyithanda.
Ngosuku lweValentine ungacebisa umtshato. Esi iya kuba sisipho sikaValentine nobabini eniya kusixabisa. (Ukuba yamkelwe, oko kukuthi)
Ukucebisa kwidrive ende ayilombono mibi nokuba. Isiqalo esifanelekileyo sokuqhuba kunye endleleni ebizwa 'uBomi.'
Ukumcebisa ngomhla wakhe wokuzalwa ngumbono olungileyo. Lusuku lwakhe lokonwaba kutheni ungaluzalisi ngolonwabo kunye novuyo kuye? Le yincopho yeJaya Bachchan bhanyabhanya bhanyabhanya uGuddi.
Ukucebisa kunomathotholo kunokuba yenye indlela enomdla. Ngamajelo amaRadiyo amaninzi kunokwenzeka ukuba unxibelelane nawo. Ke qhubeka umcebise ngonomathotholo, kodwa ke sonke isixeko simamele.
Ukuhlaziya iinkumbulo zakho kuya kubuyisa isikhukula senkumbulo ezimnandi kwaye kuya kumbeka kwimeko elungileyo yesindululo sakho. Amathuba kukuba uyakuxabisa nokucinga kwakho ngokuzama ukuphinda uphinde ube naloo mava akhethekileyo. Cinga ukuthatha intanda yakho uye nayo kwindawo entle yeepikniki zothando. Apha unokucinga ngokucebisa.
Thela iglasi ye-champagne ngesangqa sokubandakanya emazantsi eglasi. Unesithuba esifanelekileyo sokugcoba ikamva lakho kunye.
Yidleni kunye kwindawo yokutyela oyithandayo. Ngaba umlungiseleli umnike i-cookie eninzi kunye 'Ngaba uya kutshata?' efihliweyo ngaphakathi. Ukuba ikuki yelicwecwe ayifumaneki, mayibhalwe kwikhekhe ayithandayo.
Ngcono nangoku, ukuba uyakwazi ukupheka, yitya isidlo sangokuhlwa esimnandi kwaye uphakamise isidlo sangokuhlwa esikhanyiswe ngomculo okhanyayo ngasemva.
Ukuba kunokwenzeka unokucebisa kwindawo owahlangana kuyo okokuqala. Namhlanje izipho ezizezakho ziyafumaneka kwaye ungabhala umyalezo wakho ngeTshokholethi, iKofu Mug, iPillow nezinye. Sebenzisa umbono, okulungele kakhulu. Khawusixelele kwenzeke ntoni.
indlela yokwenza akshaya tritiya puja
unxiba njani umntwana wakho njenge krishna
Iingcebiso ezilula ze-vastu zekhaya elonwabileyo
singasela ubisi olunethoni ngaphandle kokubilisa
ukuthambisa ioyile ngokonyuka kobungakanani besifuba